YouTube loogu talagalay Android ayaa lagu cusbooneysiiyay bar cusub oo jiheeya | Androidsis
Google ma joogsato dadaalkeeda ah inay si joogto ah u hagaajiso codsiyada iyo adeegyada ay siiso dadka isticmaala; dhif waa maalinta aynaan helin war ku saabsan horumar hor leh. Haddii maalmo ka hor aan kaala hadalnay waxa ku saabsan ballaarinta howlaha wadaagga qoyska adeegyo cusub, iyo goor dambe oo ku saabsan shaqada "keydka" cusub ee Sawirada Google, hadda waa wareegga barnaamijka YouTube ee loogu talagalay Android.
Isticmaalayaasha YouTube-ka ee Android waxay goor dhow ogaan doonaan taas baarka sare ee haggu wuxuu u dhaqaaqayaa xagga hoose shaashadooda. Waa wax cusub oo lagu soo daray cusbooneysiintii ugu dambeysay ee durba la bilaabay in la geeyo.
Sida laga soo xigtay daabacaadda oo ay sameysay Marissa, Maamulaha Bulshada ee shirkadda ee ku taal madasha wax soo saarka Google, cusbooneysiinta cusub ee barnaamijka YouTube ee loogu talagalay Android oo dhaqaajisa baarka hareeraha kor ilaa hoose ee interface, ka dhigi doonta waayo-aragnimada YouTube-ka ee barnaamijyada moobiilku mid iswaafaqsane sidaas, dhab ahaantii, interface-ka cusub ee adeegsadaha ayaa hadda sidoo kale laga heli karaa arjiga loogu talagalay macruufka.
Marka, laga bilaabo hadda, bar-tilmaameedka hoose wuxuu muujinayaa xulashooyinka Hoyga, Isbeddellada, Diiwaangelinta iyo Maktabadda.
Sidoo kale, qaybta maktabaddu waxay ka madax-bannaan tahay ikhtiyaari-xisaabeedkii hore, oo hadda laga heli karo astaanta astaanta ee kore, oo ay weheliso Dejinta. Fiidiyowyada aad soo dhejinaysaa waxay ku jiraan qaybta maktabadda, marka lagu daro taariikhdaada daawashada iyo liiskaaga liiska.
Bar-tilmaameedka hoose waxaa laga heli karaa dhammaan bogagga barnaamijka YouTube-ka, marka laga reebo markaan daawaneyno fiidiyowyada. Intaas waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu xusuusan doonaa meeshii aad uga tagtay tab kasta, taasoo ka dhigaysa mid fudud in la maro marka aad u dhexeyso qaybaha kala duwan ee barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » YouTube loogu talagalay Android ayaa lagu cusbooneysiiyay bar cusub oo hoose